DIGNIIN: Dadka iska dhigaya inay dowladda ka socdaan oo dadka ILMAHA ka qaadanaya oo Maraykanka ka dillaacay! (Qiso dhacday) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DIGNIIN: Dadka iska dhigaya inay dowladda ka socdaan oo dadka ILMAHA ka...
DIGNIIN: Dadka iska dhigaya inay dowladda ka socdaan oo dadka ILMAHA ka qaadanaya oo Maraykanka ka dillaacay! (Qiso dhacday)
(Delaware County) 13 Okt 2019 – Haweenay Maraykan ah oo la yiraahdo Ashley Bradley ayaa ka sheekaysay arrin ay sheegtay inay iska jiraan waalidiinta kale, waxay ku bilowday:
”Waxaan guriga la joogey wiilkayga, markii ay haweenay albaabka soo garaacday, iyadoo sheegaysa inay ka socoto qaybta daryeelka bulshada (social) ee Delaware County, Maraykanka, ayna u timid in wiilkayga la iga qaado.”
”Markii hore waan yara xanaaqey, balse markii dambe waxaan arkay inaysan wadanin baajka gobolka. Magaca wiilkayga si khaldan baa loo qoray, marka la eego galkii ay gacanta ku haysey. Waxaa dheer ma jirin wax kiis ah oo igala dhexeeyay daryeelka bulshada, marka sabab ay gurigayga iskaga yimaadaan ma jirin.”
”Markii aan waydiiyay inay i tusto aqoonsigeeda, balse way is xanaajiyay, iyadoo leh: ”Waan kuu sheegay cidda aan ahay”, waxaan aniguna u sheegay inaan Booliiska wacayo, waana dhaqaaqay anigoo aadey dhankii telefoonka, iyadoo taagan balkoonaha hore ee gurigayga.”
”Goortii aan dhaqaaqay oo aan fadhiga tegey, waxaan daaqadda ka arkay iyadoo gurigayga dhinac maraysa oo socod boobsiinaysa….. Waxaan markiiba wacay booliiska oo aan arrintii u sheegay, in haddii uu qof isku dayo inuu ilmahayga qaato uu gurigayga uga bixi doono boorsada maydka.”
”Booliiskii ayaa deeto u sheegay inay jiraan dad da’ kasta iskugu jira oo sidaa guryaha u taga iyagoo iska dhigaya inay dowladda ka socdaan kaddibna ilmaha ka qaata qoysaska dagan oo deeto la fakada.”
SOO JEEDINTA BOOLIISKA: ”Albaabka xiro, booliiskana wac, ilmahaagana hayso ilaa inta ay ka imanayaan.”
Previous articleUgu yaraan 10 askari oo Kenyan ah oo ay miino la kacday
Next articleQARIXII SOOBBE IYO QUDHAYDA!!!